Dowlada Turkiga oo ka hadashay Wararka sheegaya in ay jartay Dhaqaalihii Tooska ahaa ay siin jirtay Dowlada Soomaaliya	« BredaNews
Dowlada Turkiga oo ka hadashay Wararka sheegaya in ay jartay Dhaqaalihii Tooska ahaa ay siin jirtay Dowlada Soomaaliya
269 Views Date February 17th, 2014 time 11:38 am
Dowlada Turkiga ayaa wax kama jiraan ku tilmaantay warar dhawaan soo baxayay oo sheegayay in ay jartay dhaqaalihii tooska ahaa ee ku taageeri jirtay Dowlada Federaalka Soomaaliya.
War kasoo baxay Wasaarada Arimaha Dibada Dowlada Turkiga ayaa lagu beeniyay in la joojiyay dhaqaalihii Kaashka ahaa ee Dowlada Turkiga ugu tala gashay in ay ku caawiso Dowlada uu Madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasaaraddu ayaa sidoo kale sheegtay in Turkiga lacagta ay u dirtay Soomaaliya inta u dhaxeysay bilihi June iyo December ee sanadkii tegay kadib codsi uga yimid Madaxweynaha Soomaaliya kaas oo ku saabsan caawinta dowladdiisa. Lacagta ayaa lagu bixiyey kaash sababto ah ma jirin nidaam bangi oo ka shaqeynayay Soomaaliya, ayay tiri Wasaaraddu.
Wasaarada Arimaha Dibada dalka Turkiga ayaa tilmaantay in dib loo bilaabayo dhaqaalihii tooska ahaa ee lagu taageeri jiray Dowlada Federaalka Soomaaliya sanadkan 2014-ka.
Warkan kasoo baxay Wasaarada Arimaha Dibada dalka Turkiga ayaa imaanaya xili dhawaan Wakaalada Wararka Reuters oo soo xiganeysa Sarkaal ka tirsan Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga uu sheegay in la joojiyay dhaqaalihii tooska ahaa ee lagu taageeri jiray Dowlada Soomaaliya.